ESI EDEBA MKPADO NA YOUTUBE - YOUTUBE - 2019
Tinye mkpado na vidiyo na YouTube
N'oge na-adịghị anya, mgbe ị na-arụ ọrụ na ederede ederede na MS Word, enwere ike ịjụ ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ iji tinye nọmba ndị Rom. Nke a bụ eziokwu karịsịa mgbe ị na-ede edemede, akụkọ nyocha, okwu oge ma ọ bụ nzaghachi, yana akwụkwọ ọ bụla ọzọ dịka ebe ịkwesịrị idebe aha nke narị afọ ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke isi.
Ịkpọ ụda nọmba Rom na Okwu abụghị ọrụ dị mfe; Ọzọkwa, e nwere ọtụtụ ụzọ abụọ iji dozie ya. Anyị ga-akọwa otu esi eme nke a n'okpuru.
Usoro otu dị mfe ma bụrụ nke a na-ahụkarị, nke ọtụtụ ndị maara nke ọma ma na - eme ka ọ dịrị mfe itinye nọmba ndị Rom na Okwu. Ọ na-agụnye iji nnukwu akwụkwọ ozi Bekee (Latin).
1. Gbanwee nhazi ihuenyo, ma ọ bụrụ na ị nwere asụsụ Russian ugbu a. Jiri ụzọ mkpirisi keyboard maka nke a. "Ctrl ịgbanwee" ma ọ bụ "Alt Shift", dabere na nke a na-eji na usoro gị.
2. Tinye akwụkwọ ederede a chọrọ n'aka nke ọnụ ọgụgụ ndị Roman, na-ejide isi ihe "Mgbanwe" ma ọ bụ gbanwee maka oge "CapsLock"ma ọ bụrụ na ọ kaara gị mma.
Ya mere, iji dee na nọmba ndị Rom 26, banye Xxvi. Iji dee 126banye CXXVIebe onye ọ bụla agwa bụ nnukwu akwụkwọ ozi "X", "X", "V", "M" ke akpa ikpe ye "C", "X", "X", "V", "M" - nke abụọ
Usoro a dị mfe ma dị mma, ma ọ bụ naanị mgbe ọ dị mkpa ka ịdebe ọnụ ọgụgụ ole na ole nke Rom ma n'otu oge ahụ ị maara kpọmkwem aha aha nke ọ bụla n'ime ha. Ma, ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị maghị ọnụ ọgụgụ Rom niile nke ịchọrọ itinye n'ime ederede ahụ, ma e nwekwara ọtụtụ n'ime ha? Oge onwe gị dị oke ọnụ, anyị ga-enyere gị aka ịchekwa ya. Iji mee nke a, enwere ọganihu, ọ bụkwa naanị ụzọ ziri ezi nke iwebata nọmba ndị Rom na Okwu, nke na-adịghị achọ ihe ọmụma ọzọ n'aka gị.
1. Pịa nchikọta isi na keyboard. "Ctrl + F9".
2. Na akara aka na-egosi, tinye ọkwa ndị a: = 126 * Romanebe “126” - Nke a bụ nọmba Arabic ma ọ bụ nọmba ọ bụla ị chọrọ ịbanye na Rom.
3. Pịa igodo F9.
4. Nọmba ị chọrọ ga-egosi na akwụkwọ ahụ na aha ndị Rom. Iji wepụ isi awọ, jiri aka ekpe-pịa n'akụkụ.
N'ezie, nke ahụ nile, ugbu a, ị maara otú e si etinye nọmba ndị Rom na Okwu. I nwekwara ike ịchọta ọnụ ọgụgụ Rom na Okwu na tab "Tinye" - "Akara", ma nke a bụ ma eleghị anya ụzọ kasị sie ike na nke kachasị mma. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ gị ka otu n'ime ụzọ ndị a dị n'elu iji jiri rụọ ọrụ na akwụkwọ. Maka akụkụ nke anyị, naanị anyị nwere ike ịchọrọ ka ị na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ na mmụta.